Godot ane mutsva mutsva. Iyo inogadzira mitambo yemakasino | Linux Vakapindwa muropa
Godot ane mutsva mutsva. Iyo inopa kasino
Godot, injini yekugadzira mhuka 2d uye 3d vane mutsva platinum anotsigira. Godot anenge yepachena uye yakavhurwa sosi chirongwa.
Iye mutsva anotsigira ndiye Interblock. Pawebhusaiti yayo kambani inoitsanangura se
Anotungamira anovandudza uye mutengesi wezvakanaka zvemagetsi bhodhi zvigadzirwa zvigadzirwa. Yedu mitambo yevatambi vemitambo yakawanda inoisa zviyero zveindasitiri uye inopa yekupedzisira mune yakasununguka yekudyidzana zviitiko zvevaraidzo zvevatengi vedu vatengi.
Uye ndiani Interblock vatengi vake?
Casinos uye vhidhiyo mutambo nzvimbo.
1 Chii chinonzi injini yemutambo
2 Sei Godot aine mutsva mutsva?
3 Godot Mitambo Injini Zvimiro
Chii chinonzi injini yemutambo
Injini yemutambo i seti yekodhi maraibhurari ayo anofambisa chirongwa uye kuitiswa kwemavhidhiyo mutambo. Zvimiro zvaro zvinowanzo sanganisira injini yemifananidzo ye2D uye 3D dhizaini, injini yemuviri yekuteedzera mitemo yefizikisi (kana kungoita kubatika kwekurovera), kuchangamuka, kunyora, kurira, njere dzekunyepedzera, netiweki, kutenderera, manejimendi manejimendi. uye scripted mutauro kutsigira.
Sei Godot aine mutsva mutsva?
Mumwe anogona kushamisika kuti nei kasino muchina wekugadzira angave anofarira Godot. Izvi ndizvo zvinokosheswa nekambani.
Kupindirana ndiko kambani yekuSlovenia chii chakatanga kugadzira otomatiki ma roulettes kunyangwe nekufamba kwenguva ivo vakawedzera yavo chigadzirwa mutsetse. Parizvino ivo vanogadzira ese Hardware ayo avanotengesa. Nekuda kwekupindura vateereri vajaira padanho remazita anowanikwa ekunyaradza, vakamanikidzwa ku shandisa chaiyo-nguva 3D mifananidzo uye mhando mifananidzo.
Aya ndiwo marondedzero avanoita nei vakafunga kushandisa Godot
Kwemakore maviri apfuura isu tanga tichitsvaga tekinoroji mhinduro iyo inopa yakaenzana nhanho yekuita uye nyore kwekushandisa iyo timu yedu yakashandiswa kushanda nayo. Isu takaongorora zvimwe, asi kana Godot aisa C # ndiyo yaive simbi yekuti isu tishandure. Chero chirongwa che Open Open chaivewo chinhu chakakosha pakuita kwedu sarudzo. Kuva nekuwana kwakananga kune iyo kodhi mukana wakakura. Iye zvino zvatiri kubatanidzwa muchirongwa cheGodot, uyeIsu tinofara kuti zvakare tibatsire mukubudirira kwako kwese.
Godot Mitambo Injini Zvimiro
Godot ari multiplatform 2D uye 3D vhidhiyo mutambo injini. Iyo inosunungurwa pasi peMIT yakavhurwa sosi rezinesi uye inovandudzwa nenharaunda yevanopa. Injini inogona run pasi peWindows, OS X, Linux uye BSD mashandiro. Inogona kushandiswa kugadzira mitambo ye Windows, OSX, Linux, HTML5, WebAssembly
uye mafoni mapuratifomu.
Godot yaive chishandiso chekushandisa mukati meiyo yekuArgentina kudzidza Okam iyo yakaburitsa kodhi muna 2014
Izvozvi ine rutsigiro rweinotevera mitauro mitauro:
GDScript: Ndiwo mutauro wechizvarwa weprojekti muchitaera chePython. Iyo inokutendera iwe kuti ugadzire mitambo kubva pakutanga pasina matambudziko.
C #: Yakazara rutsigiro rwevhezheni 7 yeiyi C musiyano wakagadzirwa neMicrosoft kune yayo NET chikuva. Inoda kushandiswa kwezvikamu kubva kuchirongwa cheMono. Iyo Mono projekiti ndeye kumisazve kuitisa iyo NET chikuva pasi peakavhurika marezinesi.
C ++: Rutsigiro ruzere pasina kukosha kwekuvaka zvakare injini.
Chinyorwa Chekuona: Inofambisa kugadzirwa kwemitambo nekuona zvinhu zvinowoneka.
Kuburitswa kwemifananidzo ye 3D kunosanganisira zvinotevera zvinhu:
Kupa kunosanganisa kumhanya kwekunongedza kwakanangana nemhedzisiro yehusimbe.
Iko kupa kunoenderana nefizikiki uye ine rutsigiro ruzere rweMSAA. MSAA mufananidzo-yekugadzirisa nzira iyo inotsvaga kupinza mifananidzo uye kudzivirira mativi akasangana.
Kuvhenekerwa kwepasi rose kweyechokwadi-nguva mifananidzo. Inogona kuchinjirwa kumidziyo ine mashoma graphic performance.
Kugadzirisa mhedzisiro panguva uye kumagumo kusanganisira nyowani mamepu mamepu, kuratidzwa munzvimbo yechiratidziri, mhute, kutumbuka, kudzika kwemunda uye zvimwe zvakawanda.
Nyore-kushandisa-GLSL-yakavakirwa shader mutauro ine yakavakirwa-mukati mupepeti uye kodhi auto-yekupedzisa.
Inoshanda nemapikisesi sehukuru hwepasi pemifananidzo. Kugona kwekukwirisa kune chero saizi yekuyera uye chiyero chechimiro.
Clip uye sprite based animation.
Kinematic kudhumhana kudzora.
Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezvaGodot, unogona kuwana ruzivo pa yavo webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Godot ane mutsva mutsva. Iyo inopa kasino
Slimbook PROX 15: iyo nyowani ultrabook Apple Macbook mhondi